Ehlambulukileyo - Xhosa - Allemand Traduction et exemples
Vous avez cherché: ehlambulukileyo (Xhosa - Allemand)
Dala phakathi kwam, Thixo, intliziyo ehlambulukileyo, Uhlaziye umoya oqinisekileyo phakathi kwam.
Ke intsingiselo yoyalo iluthando oluphuma entliziyweni ehlambulukileyo, nasesazeleni esilungileyo, naselukholweni olungahanahanisiyo;
aboyalwa ngawo ngemini yento eyinqambi, nangemini yento ehlambulukileyo. Nguwo lowo umyalelo weqhenqa.
Niyenze nyulu nje imiphefumlo yenu ngokuyilulamela inyaniso ngoMoya, kuse ekuthandeni abazalwana okungenaluhanahaniso, thandanani ngenyameko, ngokwasentliziyweni ehlambulukileyo;
Ke zibaleke iinkanuko zobutsha; phuthuma ke ubulungisa, ukholo, uthando, uxolo nabo bayinqulayo iNkosi ngokwasentliziyweni ehlambulukileyo.
Indoda ehlambulukileyo yoluwola uthuthu lwethokazi, ilubeke ngaphandle kweminquba endaweni emhlophe, lugcinelwe ibandla loonyana bakaSirayeli, lube lolwamanzi okuhlamba ukungcola: lidini lesono eli.
Ize niyahlule into ezitho zine ehlambulukileyo kweyinqambi, nentaka eyinqambi kwehlambulukileyo, ningayenzi imiphefumlo yenu ibe nezothe ngento ezitho zine, nangentaka, nangento yonka enambuzelayo emhlabeni, endinahluleyo nayo kuba iyinqambi.
indoda ehlambulukileyo ithabathe ihisope, iyithi nkxu emanzini, ifefe intente, neempahla zonke, nabantu ababekuyo, nalowo uchukumise ithambo, nobuleweyo, nofileyo, nokuba ke kusengcwabeni.
karunai kilangu (Anglais>Tamoul)destination (Anglais>Lituanien)impietosa (Italien>Néerlandais)i slipped and i fell (Anglais>Italien)pritrjena (Slovène>Allemand)jeff (Italien>Français)moi (Tamoul>Anglais)laurea in lettere moderne (Italien>Anglais)eltávolítását (Hongrois>Vietnamien)xsxx,xsxx vodyeeeeeeeee (Italien>Français)benefiber (Espagnol>Anglais)macmamitam saldedas lumpacas in tagalog (Latin>Anglais)dimana ini (Indonésien>Anglais)nitamu sana (Swahili>Anglais)j'espere que je suis dans le ton (Français>Anglais)annat (Suédois>Polonais)periarthritis (Anglais>Grec)curiethÃ£ÆÃ¢Â©rapie (Français>Anglais)basyo ng bote (Tagalog>Anglais)provisiota (Finnois>Anglais)mifa (Néerlandais>Français)diplomataigazolvánnyal (Hongrois>Allemand)kuma buzi (Swahili>Anglais)cervi (Italien>Grec)descuate de manzana (Espagnol>Anglais)